ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
Min Thuta | Knowledge | August 18, 2019
ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ မိမိနဲ့သင့်တော်မဲ့ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? မိမိဘဝအတွက် Career ဆိုတာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းတွေးကိုတွေးထားမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါအတွက်တွေးထားတာဘာမှမရှိသေးတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုစတင်ရွေးချယ်ရမလဲမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ရွေးချယ်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ သင်နဲ့သင့်တော်ပြီးလိုက်လျောညီထွေရှိမဲ့ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင်ပြန်ပြီးလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။
သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ၊ဝါသနာ၊လုပ်နိုင်စွမ်း၊ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် စတာတွေကို သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး သင့်တော်မဲ့ Career ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ Career တွေကိုရွေးချယ် List လုပ်ပြီး သင်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အရာကို ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ပါ။ ဒီအချိန်မှာသင့်အတွက် ခေတ်ကာလနဲ့အညီ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် လိုအပ်နေတဲ့ လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေပြီး List လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဆိုပါအခွင့်အလမ်းတွေထဲကမှ သင့်ရဲ့ဝါသနာ သင်နဲ့ကိုက်ညီနိုင်မဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို Details နှင့်တကွ List သေချာလုပ်ထားပါ။
ပြီးမှသာ အဆိုပါအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့သင့်ရဲ့ Career အတွက်ရွေးချယ်မှုကိုစတင်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်လေ့လာသုံးသပ်ပါ။အနည်းဆုံး သင်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အလုပ်အကိုင် 10 ခုတော့ရွေးချယ်ထားပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ရွေးချယ်ထားတဲ့ List ထဲက Career တွေကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆို လိုအပ်တဲ့ ပညာရေး၊လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေ၊လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်း စတာတွေကိုပါသင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ တိုးတက်နိုင်မဲ့ တက်လမ်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ပါ။ပြီးလျင်တော့သင့်ရဲ့ List မှာပါတဲ့ရွေးချယ်ချင်တဲ့ Career ကိုထပ်ပြီးစစ်ထုတ်လို့ရပါပြီ။သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ List ထဲက Career တွေကိုပြင်ပမှာအမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအကူညီတောင်းပါ။မသိတာကိုမေးမြန်းပါ။သူတို့ဟာသင့်အတွက်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ကဟာတွေအကုန်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်မှန်ကန်မဲ့ Career ကိုရွေးချယ်လို့ရပါပြီ။
သင်ရှာဖွေထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ List တွေကိုသင့်ရဲ့မိဘ ဒါမှမဟုတ် အုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်အထိဆက်လျောက်ပါ။အမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့လျင်လည်း ကျရှုံးတယ်လို့မသတ်မှတ်ပါနဲ့။လူတိုင်းမှာ ပထမဆုံး ဆိုတာနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တာရှားပါတယ်။ကျရှုံးခဲ့ရင်လဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သုံးသပ်ပြီး အကောင်းမွန်ဆုံး သင့်ရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနိုင်မဲ့Career ကိုရွေးချယ်နိုင်စေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
by Min Thuta on December 21, 2019 -0Comments
မကြာခင် 2019 ကုန်ဆုံးပြီး 2020 နှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ Lifestyle ကိုထိခိုက်စေမဲ့အမူအကျင့်ဆိုးတွေကို နှစ်ဟောင်းမှာထားခဲ့ ဖို့...
by Min Thuta on January 22, 2020 -0Comments
သစ်တော သစ်ပင်တွေ ရှင်းလင်းလာတာနဲ့ အမျှ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်လာတာတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လှပသာယာဖို့အတွက်က လူသားတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့...
by Min Thuta on January 18, 2020 -0Comments
လူတိုင်းလူတိုင်းအလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အမြဲလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရပြီး အားလပ်ချိန်ရဖို့ ရန်အလွန်ပင် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခဲလှတဲ့မိမိရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံး...
Yum Yum ချဥ်စပ်ကြော်လုပ်စားကြမယ်
by Min Thuta on December 30, 2019 -0Comments
ကဲအခုလို ပိတ်ရက်တွေများတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ယောက်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရသာရှိတဲ့ Yum Yum ချဥ်စပ်ခေါက်ဆွဲကြော်နည်းကို ဝေမျှလိုက်...
All times are GMT 6.5. The time now is 9:24 am.